China TS-DQ-100 Ugboro abụọ Ogwe aka Ọdụdọ Medical Endoscopic Pendant si Factory emepụta na suppliers | Wanyu
1. ratinglọ ịwa ahụ
2. Emergencylọ Mberede
4. lọ Mgbake
1. Ọdụdọ Na-akwagharị Sistemụ
Site n'usoro eletriki na ogwe aka a na-akọwapụta, ọ ga-adaba adaba maka ihe ahụike, na-azọpụta oge na mgbatị ahụ.
Ọdụdọ Medical Pendant
2. Ugboro abụọ na-agbagharị
Ugboro abụọ na-agba ọsọ, ogologo ogwe aka nwere ike ahaziri ma nwee ike ịtụgharị ogo 350, na-enye ọtụtụ ohere maka ịgagharị.
3. Imewe Gas na Eletriki Nkewa
Dịka ụkpụrụ mba ụwa siri ike, a na-ahazi mpaghara gas na mpaghara eletrik iche iche iji hụ na eriri gas na ọkpọkọ gas agaghị agbagọ ma ọ bụ daa n'ihi na ntụgharị nke pendant.
4. Ngwongwo Ngwá Ọrụ
A na-eji ihe profaịlụ alloy dị elu nke nwere ike dị elu ejiri ike rụọ ọrụ dị mma. Enwere okporo igwe anaghị agba nchara n'akụkụ abụọ maka ịwụnye akụrụngwa ndị ọzọ. E nwere ike gbanwee ịdị elu tray ahụ ka ọ dị mkpa. The tree nwere nchebe mechie nkuku.
N'uko nọkwasi Medical Pendant
5. Outlọ Gas
Agba na ọdịdị nke ikuku gas dị iche iche iji gbochie njikọ na-ezighi ezi. Secondary akara, ala atọ (emeghe, mechiri emechi na unplugged), ji ihe karịrị 20,000 ugboro.
Hospitallọ Ọgwụ China
Ogologo nke ogwe aka:
Ọdịdị na-arụ ọrụ dị irè:
Ntughari aka: 0-350 Celsius
Ntughari nke pendant: 0-350 Celsius
Ugboro abụọ Ogwe Aka Medical Endoscopic Pendant
Ngwá Ọrụ Tree
Oxygen Gas tinyekwa
VAC Gas tinyekwa
Mgbapụta Gas Carbon Dioxide
Igwe anaghị agba nchara Nkata
Nke gara aga: QF-JX-300 China ICU Medical Iche Bridge Bridge Pendant maka Hospital
Osote: TS-D-100 Double Gas Electric Gas Pendant maka perationlọ Ọrụ
TD-Q-100 Single Ogwe aka Electric ịwa ahụ Endoscopi ...
TS-D-100 Ugboro abụọ Ọdụdọ Medical Gas Pendant ...
TD-D-100 Single Electric ịwa ahụ Gas Pendant w ...